people Nepal » लौ हेर्नुस्अर्का कामु प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको भारतीय सर्टिफिकेट ! लौ हेर्नुस्अर्का कामु प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको भारतीय सर्टिफिकेट ! – people Nepal
लौ हेर्नुस्अर्का कामु प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको भारतीय सर्टिफिकेट !
Posted on August 6, 2018 by Durga Panta
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण पत्र विवाद चलिरहँदा अर्का कामु प्रधानन्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको दैक्षिक प्रमाण पत्र पनि विवादमा आएको छ ।
उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र पनि भारतबाट नै आयातित रहेको देखिएको छ । अर्बौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर विवादमा आएका मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ ९गोरखपुर० बाट १९६९ मा र इन्टरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
केही सञ्चार माध्यममा उनको अन्तर ८ वर्ष लेखिएको भएतापनि प्रमाण पत्रमा भने २ वर्ष मात्रै अन्तर देखिएको छ ।
मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङकमा हिन्दी बिषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गरेका छन् शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै बिषय बिषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङकका हुन् ।
उनले उहाँले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गरेका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तिर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।
मिश्रले इन्टरमीडिएट परिक्षा द्धितीय श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
विवादित हुने खतरा
बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायधीश बन्ने प्रक्रियामा रहेका मिश्र पनि विवादमा आउने भएका छन् । उनका फैसलाले उनलाई विवादित बनाउने देखिन्छ ।
दीपकराज जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु।२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको थियो ।